Ukubuyekezwa Kwabhulogi: UDave Woodson, Umxhumanisi Wezokuxhumana Komphakathi | Martech Zone
NgoLwesibili, Septhemba 14, 2010 NgoLwesibili, Septhemba 24, 2013 Douglas Karr
UDave Woodson ungumxhumanisi wezokuxhumana nabantu kanye nobuchwepheshe abasiza amabhizinisi ngokuba khona kwabo ku-inthanethi. UDave wenze ukubuyekeza okuhle kwe- ibhulogi ibhuku sabhala sakubeka kuBarnes noNoble. Njengoba ethembisile, senza ukubuyekeza ibhulogi yakhe ukuhlinzeka ngempendulo eyakhayo yokuyilungisa! Nakhu okulandelayo:
Akubonakali ngokushesha ukuthi injongo yebhulogi yakho isivakashi esisha. Bekumele ngiye ku-About ukuze ngithole imizwa yalokho ebhuloga ngakho. Ngingancoma ukubeka umugqa noma inothi kubha eseceleni yangakwesokudla echaza injongo yebhulogi yakho.
Njengoba usiza amabhizinisi ngemithombo yezokuxhumana nobuchwepheshe, ngincoma okuhle call-to-action (I-CTA) ngakwesokudla phezulu kubha yakho eseceleni kuwo wonke amakhasi enza abantu bazi ukuthi uyatholakala ukuze uqashelwe. Leyo CTA kufanele idlulisele umuntu ku ikhasi lokufika elinefomu lokuxhumana nolunye ulwazi olwengeziwe kumakhasimende nezinsizakalo ozihlinzekayo.
Unonhlokweni kanye nelogo enhle… thatha uphawu bese usetha isithonjana sebhulogi yakho. Nakhu okuthunyelwe ungayenza kanjani i-favicon.
Your robots.txt ifayela lisempandeni yesizinda sakho futhi linendawo yesayithi yemephu.xml efakwe ohlwini - lokho kuhle! Ngingahlela ifayili bese ngivumela ithrafikhi kunoma iyiphi inkomba / wp- * noma ifayili - lokhu kuzomisa izinjini zokusesha ekukhombiseni izinkomba zakho zokuphatha.
Indlela yakho ye-URL (i-permalink) iyaxaka - kubukeka sengathi kunomugqa wenombolo yeposi. Angicabangi ukuthi lokho kukuzwisa ubuhlungu, kodwa kuyinto encane. Njengoba ungekho ezingeni eliphakeme kunoma yimiphi imiphumela yosesho (ngisebenzisa Semrush Ukuqinisekisa), ngingahle ngikukhiphe lokho, kubukeka sengathi kungogaxekile. Ungasebenzisa imithetho ye-htaccess ukushintsha i-permalink. Intandokazi yami ngu /% igama lesibongo% /. Isakhiwo se-URL asinamphumela omningi njengakuqala, kepha ngubani owaziyo ukuthi sizobuya nini!
Ukuhlelwa kwebhulogi yakho kuyesabeka - kucace bha futhi kulula ukubona yonke into. Ngiyayithanda ibha yakho ye-Apture enhla phezulu, iyayinciphisa imfuhlumfuhlu eyengeziwe ekhasini.
Ngifisa sengathi ngabe bekukhona okuhle isithombe kwakho kusihloko. Abantu badinga ukwazi ukuthi ngubani uDave - futhi isithombe esihle sizohlinzeka lokho kuthinta komuntu okuzokwakha ukwethembana futhi kukwazise ngabantu abangena kubhulogi yakho. Nginesithombe sami yonke indawo, ngisho naku- my amakhadi ebhizinisi. Lapho othile ethatha ikhadi lami emasontweni ambalwa kamuva, bazokhumbula ukuthi bengingubani. Angikwenzi ngoba nje ngicabanga ukuthi ngimuhle;).
Okuthunyelwe kwakho kubhalwe kahle nge isikhala esikhulu phakathi kwezigaba nokusetshenziswa ngempumelelo kohlu. Izinhlu ziyasebenza kakhulu lapho kubhalwa ngoba abantu bangaziskena kalula. Ngingakukhuthaza ukuthi ukwandise usayizi wefonti yakho kancane futhi usebenzise amagama agqamile nama-ithalikhi kumagama abalulekile ofisa ukuwashayela ekhaya nokuqukethwe kwakho.
"I-Social Media & Tech" ibinzana elingukhiye kakhulu, elibanzi nelinokuncintisana esihlokweni sebhulogi yakho. Ngabe kukhona i-niche ongayibhekisa emincane futhi enomsila omude ngokwengeziwe? Ngokukhomba amagama angukhiye anomsila omude, ungathola ithrafikhi efanele ngokushesha kusuka ekusesheni. Igama elilodwa elinjalo ngu ukusebenzisa izinkundla zokuxhumana ngebhizinisi. Ithola kuphela ukuseshwa okungaba ngu-30 ngenyanga, kepha lokho izivakashi ezintsha ezingama-30 kusayithi lakho njalo ngenyanga.
Uhamba ngokweqile lapho wabelana ngezixhumanisi. Ngeqiniso angikaze ngibone noma yimuphi wale misebenzi kunoma yiliphi ibhizinisi ngaphandle kwenkinobho ye-Twitter ye-retweet (osuvele unayo) futhi Inkinobho efana ne-Facebook.
Isixhumanisi esiya ku- ikhasi lokuxhumana kungcwatshwe kumenyu yakho yokuzulazula. Imininingwane yokuxhumana njengenombolo yocingo, ikheli, noma ikhasi lokuxhumana elihambisanayo nefomu kufanele kube lula ukulithola kuyo yonke ibhulogi. Abantu abaziniki isikhathi sokufuna isiza ... uma bengakutholi, bayahamba. Ngikhuthaza amanye amabhizinisi ukuthi abeke lolo lwazi kuwo wonke amaheda nonyaweni.
Ithuba elikhulu engikubonela lona ukusebenzisa ibhulogi yakho ngokwezihloko nangezindawo ukuheha amabhizinisi amasha. Ngokugxila esifundeni sakho futhi ugqame njengomxhumanisi wezokuxhumana lapho, ungasebenzisa ukuseshwa esifundeni kusuka kumabhizinisi afuna usizo lwakho. Kodwa-ke, kufanele uqiniseke ukuthi unamakhasi asebenzayo wokuthatha isenzo kanye namakhasi afika endaweni ukuze bakwazi ukuxhumana kalula nawe!
Siyabonga ngethuba lokubuyekeza isayithi lakho! Futhi ngiyabonga kakhulu ngokubuyekezwa kwencwadi yethu!
Ucwaningo Lwezenhlalo Ingxenye 2 - Ukubhekisisa I-Facebook
Sep 14, 2010 ngo-10: 29 PM
Sep 14, 2010 ngo-10: 45 PM
Ngiyabonga uDoug, unginike uhlu oluhle lokuwasha engizosebenzela kulo. Le yibhulogi yami yokuqala engake ngayenza futhi lokho akuyona izaba, kepha yindawo yami yokuhlola.
ngiyabonga ngombono wakho othembekile
Sep 14, 2010 ngo-11: 29 PM
Kuyesabeka ukuthola izeluleko ezinjalo ezisebenzayo. Indlela yokuzibeka lapho ukuze ukhule kangcono. Nginethemba lokuthi ngingakhula ngibe yisinqe futhi ngipholise ngelinye ilanga.
Sep 15, 2010 ku-1: 18 AM
Kuhle lokho ukumenzela lokhu uDoug njengoba ngiyazi ukuthi ukwazisa kakhulu. Ngivumelana ngenhliziyo yami yonke nokuningi okushoyo futhi nginama “nitpick” ambalwa nje uqobo.
Manje lokhu akusebenzi kusayithi likaDave njengoba izithombe zakhe ngokuvamile kungezona ezakhe kepha kwabanye zikhona. Kulabo ongafuni ukutshela izinjini zokusesha ukuthi zingayinaki ngokuphelele ifolda yakho ye-wp-okuqukethwe njengoba ngokuzenzakalela ukulayishwa kwesithombe kungena ku- / wp-content / uploads / nakumasayithi afana nawomkami (ungumculi, futhi hasn ' Bengilokhu ngiyigcina ngakho-ke ngeke ngihlanganyele imbangela yokuthi uzonda lapho ngenza) ngithole ithrafikhi eningi ekufuneni isithombe. Kwinothi eliseceleni, anginasiqiniseko sokuthi ngabe lokhu kuguqulwe kuyo yonke i-WP3 noma kunikwe amandla i-multisite kepha kubonakala ngathi akusasebenzisi okuqukethwe kwe-wp (ukusethwa kwami ​​kuphela kwe-WP3 kungukuningi kungabi yi-100%, noma ngabe ukuthuthuka kuzoba okuhlukile lapho-ke uma benze okuzenzakalelayo okuhlukile kokusha, ngakho-ke bazodinga ukuziqinisekisa ngokwabo) kepha uma kushintshiwe lapho-ke kungayinaka yonke i-wp-
Okulandelayo, um, umbonile uDave? Ngokuzimisela, ufuna isithombe sakhe kunhlokweni? Futhi ucabanga ukuthi kungenzeka ukuthatha okuhle? Dave? Hehe, ngiyingane kaDever. 😉
Mina uqobo ngiyazonda imigoqo eqhubeka ivela kumawebhusayithi, kepha kulokhu engikutholayo ngingomncane. Into eyodwa kodwa ngithanda kakhulu ibha kule bhulogi kunaleyo kaDave. Ngezansi kuphumile endleleni futhi kukhombisa njalo. Noma kunini lapho ngithola okuthile okuvela phezulu okuhlanganisa okuqukethwe ngizwa sengathi empeleni kukhona okungahambi kahle. Mhlawumbe uma ibha ibihlala njalo bekungangcono ngoba ngokwemvelo ubungalungisa umqulu wakho uye kuyo, kepha ezansi kwekhasi kunamathuba amancane okungena endleleni. Uma ngiphenya phansi ukuze ngifunde i-athikili angifuni ukuthi uvule ibha evimba umugqa wesibhakela wendatshana kimi, noma okubi kakhulu okuthinta konke okuqukethwe. Yize u-atleast engenayo yonke into eyisembozo futhi angincenge ukuthi ngibhalisele ibhokisi lakhe lohlu lwamakheli, lokho kubi kakhulu. 🙂
Umkhawulo wakho ongu-3000 uyangibulala 😉
Kulungile amanye amaphuzu ama-2 engixoxe ngawo noDave nge-IM kepha ngathola ukuthi ngizokwabelana ngawo lapha.
Okokuqala yinye engiyaziyo ukuthi abantu bahamba zombili izindlela. Ngincamela ukungabi nayo i-athikili ephelele ekhasini lokuqala. Okokuqala uthola ukubukwa kwekhasi okungeziwe uma lokho kubalulekile kuwe, kepha futhi kukwazisa ukuthi yini umuntu akuthole kubambe ngokwanele ukwenza okuningi ngokuchofoza. Uma i-athikili yonke lapho bangafunda u-1 no-4 kwabangu-5 ungazi. Futhi kwenza kube lula ngomunye umuntu ukuthola i-athikili ayithandayo ngaphandle kokupheqa amakhasi ukuze afike esihlokweni esilandelayo (okuthunyelwe nguDave akukude kangako kepha uma kungadala ukucasuka nabantu bangafiki esihlokweni abebengasithanda. ) Kepha ngiyazi ukuthi abanye bazizwa bephambene nalokhu futhi kuyintandokazi yomuntu siqu engu-50/50.
Okwesibili ukuba nohlobo oluthile lombhalo ohambisana nalokho okushiwo kuvidiyo. Kuze kube yilapho iGoogle ifunda umsindo ngaphandle kwamavidiyo (futhi liek kufanele ukwethembe lokho, wow ukuhumusha kwami ​​kwezwi kwe-Google KUYANYANZEKA) futhi ukufaka imiphumela yosesho udinga ukuthi amaphuzu e-vid abhalwe kahle embhalweni. Yize ukuloba okuphelele kungaba kuhle ngiyazi ukuthi kubuhlungu kepha ukuthola nje uhlu lwamaphoyinti ezinhlamvu amaphuzu amakhulu kungasiza. Umbhalo okhona uyasiza kepha ngicabanga ukuthi okuningi kwalokho okuku-vid nakho kungasiza.
Uxolo ngokungeza i-ramble ende ku-🙂 futhi futhi ama-big ups kuwe ngokumenzela lokhu.
Sep 15, 2010 ku-8: 00 AM
Ukuphela kwengingabuyela emuva kuko ukwenza abantu bacofe i-athikili, uRichard. Le ndlela ingeyezindawo ze-CPM (izindleko eziyinkulungwane) lapho abakhangisi bagcina ngokukhokhela ukubukwa kwamakhasi. Kuyindlela yokufakelwa yokwandisa ukubukwa kwabo kwamakhasi ngakho-ke benza imali eningi… ngokulimaza umfundi.
Angibuboni obunye ubufakazi kuze kube manje ukuthi okuthunyelwe okuyingxenye kuhambisa ithrafikhi ethe xaxa kusayithi noma kushayela ukuguqulwa. Kuze kube ngikwenza, angizukukwenza. 😎
Sep 15, 2010 ku-8: 02 AM
Kuyibhulogi enhle, Dave! Ungabheki lolu hlu njengolubucayi, belungadalelwanga ngaleyo ndlela. Yonke impendulo eyakhayo okufanele isize ibhulogi yakho ikhule futhi ikutholele ibhizinisi elithile!
Sep 15, 2010 ku-8: 55 AM
Kuzofanele ngivumelane nawe ngokungabi nokubukwa okugcwele kokuthunyelwe ekhasini eliyinhloko. Imicabango yami yile:
1.) Kufanele ube nokuthunyelwe kwakho okudume kakhulu ekhasini lakho langaphambili esigabeni sesici. Lokhu okuthunyelwe kwakho kwemali kukhiqize imali engenayo noma ingxoxo eningi. Kunesizathu sokuthi kungani ithandwa kakhulu, mhlawumbe ngoba ibhalwe kahle futhi ihlobana kahle nabasebenzisi abaningi. Ngakho-ke kungani ungabakhohlisi ekhasini lakho langaphambili yize kungenzeka babe nenyanga noma ezimbili ubudala. Awufuni zingcwatshwe kokuphakelayo kwakho uma zikunikeza inzuzo enhle kakhulu.
2.) Okusele kufanele kube amazwibela amasha akho asuka kokuphakelayo. Abantu, i-IMO iya ekhasini lokuqala ukuthola umbono ojwayelekile wesayithi. Unemizuzwana engama-30 noma mhlawumbe ngaphansi ukugcina ukunaka kwabo. Ngakho-ke ukuba nezithupha namazwibela wokuphakelayo kwakho ngethemba lokuthi kuzodonsa ukunaka kwabafundi kokuthile. Uma unamaposi agcwele, mina uqobo uma ngingasithandi isihloko sakho sokuqala esigcwele kungenzeka ukuthi ngingaqhubeki ngesayithi. Kepha uma ngikwazi ukufunda izihloko zakamuva nokuthunyelwe kuma-snippets ngibona okuningi ngesayithi futhi ngingajula kakhulu.
Ingesinye sezihloko ezinkulu zohlobo lwempikiswano. Ngithola ukuthi iningi labantu abazibiza nge "blog" noma "pro" blogger bakhetha ukubuka okuthunyelwe okugcwele ekhasini lokuqala.
Kepha ekuphenduleni i-doug: Angibuboni ubufakazi bokuthi kuze kube manje ukuthi okuthunyelwe okugcwele kuhambisa ithrafikhi ethe xaxa kusayithi noma kuqhuba ukuguqulwa. Kuze kube ngikwenza, angizukukwenza. 😎
Sep 15, 2010 ngo-3: 39 PM
Ngiyavuma ukuthi kwabanye uhlobo lwenkinga ye-CPM. Kimi yize ngicabanga ukuthi kuyasiza ukunquma ukuthi yiziphi izivakashi ezifundwa empeleni uma kuqhathaniswa nokungazi ukuthi babekhathalela ngokwanele ukuthi bangafunda noma cha. Anginalutho lokuguqula uqobo futhi ngaphezulu ngifuna ukwazi ukuthi ngabe umuntu ubekhathalela ngokwanele ngakho yini ukuya phambili noma empeleni uma bebengenandaba nokuthola okuningi.
Empeleni kufanele nje bakwenze kube ukusethwa kohlobo lwe-JS ukuze “bangene kulelo khasi, babone okuncane kuphela ukunquma ukuthi bafuna okungaphezulu, kepha bese bethola i-athikili ephelele lapho futhi ngithola idatha engiyifunayo. Lokho kungahle kube i-combo elula / enhle kunazo zonke engikufunayo.
Ngo-Apr 11, i-2011 ku-2: i-08 PM
Okuthunyelwe okumangalisayo! Kuyathakazelisa kakhulu futhi kuyafundisa.